NAS ဆာဗာဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ၊ ဘာအတွက်လဲ။ မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Jesus Sanchez | | လဲ tutorial
NAS ဆာဗာတစ်ခုသည် ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်သိုလှောင်ရေးကိရိယာ ဒါဟာအစများစွာသောအခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးထားပါတယ်။ နောက်ဆောင်းပါးတွင်ဤအမျိုးအစားများကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြလိမ့်မည်။ သူတို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ကြသလဲ၊ နှင့်၎င်း၏အားလုံးဖြစ်နိုင်ခြေ။
1 NAS ဆာဗာဆိုတာဘာလဲ။
2 NAS ဆာဗာတစ်ခုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
3 NAS server တစ်ခုကဘာလဲ။
4 NAS နဲ့ဘာလုပ်လို့ရလဲ။
5 NAS ဆာဗာတစ်ခုနှင့်ပြင်ပ hard drive တစ်ခုအကြားကွာခြားချက်များ
6 NAS ဆာဗာတစ်ခုဝယ်ပါ
6.1 ပရိုဆက်ဆာနှင့် RAM
6.3 NAS ရှိ operating system နှင့် applications များ
6.4 NAS hard drives
7 NAS Server အမှတ်တံဆိပ်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်
NAS -Network Attached Storage- ဆာဗာသည် ကွန်ယက်သိုလှောင်ရေးကိရိယာ။ ၎င်းသည်အခြားအရာများဖြစ်သောမိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ ကွန်ပျူတာများနှင့်အဝေးမှထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးမှ ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။ ၀ ယ်ယူနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းများစွာရှိပြီး၎င်းရဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းစီမံမှုတို့ကြောင့်ထင်ရှားသည်။
NAS ဆာဗာများ ငါတို့လိုချင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာငါတို့ရဲ့ဒေတာတွေကိုသိမ်းထားဖို့ခွင့်ပြုပါအိမ်မှာဒါမှမဟုတ်ရုံးထဲမှာဖြစ်စေ။ ဤဆာဗာများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် အိမ်မှာငါတို့ကိုယ်ပိုင် Cloud လုပ် ၀ က်ဘ်ဆာဗာများ၊ streaming များ သူ့ဟာသူ။
ထို့ကြောင့် အဓိက function ကို NAS ဆာဗာတစ်ခုသည်သိုလှောင်မှုယူနစ်တစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြင်ပ hard drive တစ်ခုအနေဖြင့်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်သိုလှောင်မှုကို Cloud တွင်ဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ဆာဗာများပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်အိမ်.
တစ်နည်းနည်းနဲ့ပြောရရင် NAS server ဆိုတာက ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လည်ပတ်မှုစနစ်နှင့်အတူကွန်ပျူတာ တစ်နေ့ ၂၄ နာရီအလုပ်လုပ်တယ်။ ဒီဆာဗာတွေမှာတွေ့နိုင်တယ် အပိုင်းနှစ်စုံ - NAS သည် RAM၊ processor နှင့်အခြားသူများနှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်၎င်း၏ slot များထဲသို့ထည့်နိုင်သည့် hard drives နှင့်အတူ NAS ။
NAS ဆာဗာများကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်စီစဉ်နိုင်သည်။ အိမ်သုံးအတွက် NAS သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားသည် တိုက်ရိုက် router ကို ဖြစ်နိုင်ခြေမျိုးစုံကိုမွမ်းမံရန်နှင့်ကမ်းလှမ်းရန်အတွက်ကန့်သတ်ချက်မရှိပဲ local network နှင့် Internet သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုကိုရရှိရန်။
ကျွန်ုပ်တို့ NAS ကိုဆက်သွယ်ပြီးပါကစက်ပစ္စည်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာမှရယူရပါမည် browser မှတစ်ဆင့်။ ကျွန်ုပ်တို့ NAS သို့ကူးယူလိုသည့်ဖိုင်များကိုပြုပြင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များတွင် application များကိုလည်းတပ်ဆင်နိုင်သည်။
အဆိုပါ NAS ကိုလည်းခွင့်ပြုပါတယ် မျိုးစုံအသုံးပြုသူအကောင့်ကို set up မိတ္တူကူးရန်ကိရိယာတစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအခါ။ ဒီနှင့်အတူငါတို့ရပါလိမ့်မယ် ငါတို့ကိုယ်ပိုင် Cloud မိတ္တူကူးရန် ပေးစရာမလိုဘဲ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမတူညီသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည် hard drive များနှင့်အတူသိုလှောင်မှုပမာဏတစ်ခုတည်းကိုသာကန့်သတ်ထားသည်။
အများအားဖြင့်ထွက်သယ် ကန ဦး တည်ဆောက်မှု NAS တစ်ခုမှကျွန်ုပ်တို့ကိုမိနစ် ၁၅ မှ ၃၀ ကြားကြာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆာဗာမှပေးထားသောအခြားဖြစ်နိုင်ချေများနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလေ့လာလိုလျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအချိန်ပိုယူလိမ့်မည်။
NAS server တစ်ခုကဘာလဲ။
NAS ဆာဗာများသည်၎င်းတို့ပေးမည့်အသုံးပြုမှုပေါ် မူတည်၍ အသုံးပြုသူနှစ်မျိုးကိုအာရုံစိုက်နိုင်သည်။ ပြည်တွင်းသို့မဟုတ်စီးပွားရေး။ အသုံးပြုသူများအဘို့ ပြည်တွင်းNAS သည်ဒေတာသိုလှောင်မှုအယူအဆကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အသုံးပြုခြင်း၌ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် NAS သည် hard disk slot များနှင့်၎င်းတို့ကို configure လုပ်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေများကိုပေးထားသည်။
Home အသုံးပြုသူများသည် NAS ကိုလည်း configure လုပ်နိုင်သည်။ သိုမဟုတ်သိုလှောင်မှုကိုထည့်ရန်သိုမဟုတ်အခြားတစ်ပုဒ်၏အကြောင်းအရာကိုကူးယူရန်အတွက် hard drive slot များ၏အားသာချက်ကိုယူနိုင်သည် Backup ကိုနှစ်ချက်ထားတယ်၊ ဒါကြောင့် data ဆုံးရှုံးမှုလုံခြုံရေးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပေးထားတယ်။
NAS မှပေးသောဖြစ်နိုင်ခြေများအားလုံးကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာဗာနှင့်၎င်း၏ထုတ်လုပ်သူတွင်တပ်ဆင်သည့် application များပေါ်တွင်သင်အမြဲမူတည်လိမ့်မည်။ ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး စီတွင်မတူညီသောလည်ပတ်စနစ်ရှိသည် လုပ်ဆောင်ချက်များသည် NAS model ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြပါမည် အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များကို NAS မှ:
သိုလှောင်ယူနစ်ဖြေ - ငါတို့တွေ့ခဲ့ပြီးပြီဆိုရင်၊ NAS ရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ကတော့အဲဒါကို hard disk တခုအဖြစ်ရိုးရှင်းစွာသုံးစွဲဖို့ဒေတာသိုလှောင်ရေးယူနစ်တခု (သို့) အတူတူပင်ဖြစ်တယ်။ ခြားနားချက်မှာကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုလိုသောအခါ hard drive ကိုကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်မလိုအပ်ပါ။
သင့်ကိုယ်ပိုင် Cloud ကိုဖန်တီးပါ။ NAS ၏နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင် cloud အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်အမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များ၏မိတ္တူပွားများဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။
မာလ်တီမီဒီယာစင်တာ: NAS ဆာဗာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့စက်ကိုရုပ်မြင်သံကြားစက်များနှင့်အခြားစက်ပစ္စည်းများရှိကျွန်ုပ်တို့၏ hard drives မှအကြောင်းအရာများကိုဖွင့်ရန်၊ ၎င်းကို multimedia စင်တာအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုသည့် application များစွာရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ streaming များ။
P2P downloads: ဖိုင်များကို torrent နှင့်တတ်နိုင်သမျှ download လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ NAS ကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားမည့်အစား၎င်းတို့သည် NAS ဆာဗာတွင်သိမ်းဆည်းထားမည်။
ဝက်ဘ်ဆာဗာ PHP နည်းပညာကို သုံး၍ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု တင်၍ သင်တင်ပို့နိုင်သောဆာဗာတစ်ခုကိုလည်း NAS ကခွင့်ပြုသည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင် VPN: အချို့ NAS များသည် VPN သို့မဟုတ် virtual private ကွန်ယက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်အခြားအရာများအပြင်အခြားတိုင်းပြည်တစ်ခု၌ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ရန် (သို့) သင်၏အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းသည်ပိုမိုလျှို့ဝှက်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာ၏ IP ကိုဖုံးကွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဖိုင်မျှဝေရန်အတွက် FTP server: ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအသုံးပြုသူများအားဖိုလ်ဒါများကိုမျှဝေရန်သို့မဟုတ်၎င်းနှင့်ဆိုင်သောနှင့်အမည်ဝှက်ထားသောအသုံးပြုခွင့်ကိုပင်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
NAS ဆာဗာတစ်ခုနှင့်ပြင်ပ hard drive တစ်ခုအကြားကွာခြားချက်များ
ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း NAS ဆာဗာများ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်သည် ဖိုင်တွေသိမ်းထားသို့သော်ထိုအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကဲ့သို့တူညီသည်ဟုမယုံကြည်သင့်ပါ ပြင်ပ hard drive များ.
ပြင်ပ hard drive သည်သင်တပ်ဆင်။ ဖြုတ်လိုက်သောသိုလှောင်မှုယူနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းအစား၊ NAS သည်ကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ပျူတာတစ်ခုအနေဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းကိုအမျိုးမျိုးသောထုတ်ကုန်များမှလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးမည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်သည်သင်၏အပလီကေးရှင်းများနှင့်တိုးချဲ့နိုင်သည်။
NAS ဝယ်ယူတဲ့အခါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရမယ် ငါတို့ဘာတွေသုံးချင်လဲ၊ ကျွန်တော်တို့ကအဲဒါကိုအခြေခံအသုံးပြုမှုတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင် (သို့) ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သွားပြီးသတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်တွင်မှတ်ချက်ပြုမည့်အရာများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည် -
ကျွန်ုပ်တို့သိထားပြီးဖြစ်သကဲ့သို့၊ NAS သည်ကွန်ပျူတာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုဝယ်ယူသောအခါတွင်၎င်းမော်ဒယ်ရှိပရိုဆက်ဆာနှင့် RAM တို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးမည့်အသုံးပြုမှုအပေါ်မူတည်သည်။ သိုလှောင်မှုတစ်ခုအနေနှင့် အသုံးပြု၍ သိုလှောင်ထားသောကော်ပီများပြုလုပ်လိုပါကမည်သည့်မော်ဒယ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလုပ်လုပ်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာကိုပုံတူကူးယူလိုပါကသို့မဟုတ်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများကိုရွေးချယ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်ပိုမိုအစွမ်းထက်သောအရာတစ်ခုခုလိုအပ်လိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် NAS ကိုပုံမှန်အသုံးပြုရန်အတွက်၎င်းသည်လုံလောက်မှုမရှိပါ 1 GB RAM၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအသုံးပြုမှုကိုပေးမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်အလှမ်းဝေးသောအခြားလုပ်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုမည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံးရှိသော NAS တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ RAM2GB ။
NAS တစ်ခုချင်းစီကို 2TB, 4TB, 8TB, 16TB, 32TB စသည့် hard drive သိုလှောင်မှုများတပ်ဆင်နိုင်သည်။ NAS slot မ်ားကိုလူသိများသည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်။
အိမ်သုံးအသုံးပြုသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်လုံလောက်ပေမည် တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဆိုလိုသည်မှာ slot များများလေ၊ hard drive များများထည့်နိုင်လေလေသိုလှောင်နိုင်စွမ်းပိုရလေလေဖြစ်သည်။ တကယ်လို့နှစ်ခုထက်ပိုချင်ရင်၊ စွမ်းအားပြည့်ပရိုဆက်ဆာနဲ့ RAM ပါတဲ့ NAS တစ်ခုရှိရမယ်။
NAS ရှိ operating system နှင့် applications များ
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့ပြီးသောအတိုင်း၊ NAS ဆာဗာတစ်ခုသည် မူတည်၍ အခြားတစ်ခုနှင့်ကွဲပြားလိမ့်မည် ထုတ်လုပ်သူ ၎င်း၏ NAS အတွက်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် operating system ကိုရပါလိမ့်မယ်ကတည်းက။ မော်ဒယ်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားသောလမ်းညွှန်မီနူးများဖြင့်အခြားနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော interface ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။ အချို့ NAS များသည်၎င်း၏ interface တွင်ရိုးရှင်းမှုရှိရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားပြီးအချို့သည်မူအသုံးပြုရန်လွယ်ကူမှုကိုနုတ်နုတ်စဉ်ဖြစ်နိုင်ချေများစွာကိုပေးသည်။
NAS တစ်ခုဝယ်ယူသောအခါကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာမှာ၎င်းအတွင်းရှိရှိ hard drive များကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ NAS တွင်အချို့သော disks များပါ ၀ င်သော်လည်းအခြားသူများတွင်မူမပါဝင်သောကြောင့်သူတို့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်သီးသန့်ဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်။
ထို့ကြောင့်သင်ဝယ်ယူရမည် Hard drive များသည် NAS ထုတ်ကုန်များ၌အကောင်းဆုံးအခြေအနေတွင်လုပ်ဆောင်ရန်ပြင်ဆင်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် NAS အတွက် disks များကိုမ ၀ ယ်ခင်သင့်အားအကြောင်းကြားရန်နှင့်ဈေးအပေါဆုံးကိုရွေးချယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးလိုပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အတွင်းပိုင်း disk များသည်တူညီသောအဆင့်တွင်မလုပ်ဆောင်ပါကအင်အားကြီးမားသော NAS ရှိခြင်းကိုအသုံးမပြုပါ။
NAS Server အမှတ်တံဆိပ်ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်
စျေးကွက်တွင် NAS ဆာဗာထုတ်လုပ်သူများစွာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်ဝယ်ယူရန်စဉ်းစားပါကရွေးချယ်စရာများစွာရှိလိမ့်မည်။ သုံးစွဲသူများအကြားတွင်လူကြိုက်များရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးလိုပါသည်။ အောက်တွင်ကြည့်ရှုပါ။
ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှု: DS420j, DS720 +, DS419slim ။
နေပြည်တော်: F2-210, F2-422 ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ယနေ့ဤဖြစ်ကြသည် အကောင်းဆုံး NAS ဆာဗာများထဲမှတစ်ခု သင်သိပြီးသည့်အတိုင်းအရာရာသည်တိုးတက်နေပြီးစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်နေသော်လည်းစျေးကွက်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝယ်ယူခြင်းမပြုမီသင်အသုံးပြုလိုသောအသုံးအနှုန်းကိုအမြဲထည့်သွင်းစဉ်းစားကာယင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများအကြောင်းသင့်ကိုကောင်းစွာအသိပေးရန်အကြံပြုသည် ပေး ဦး လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ထို့ကြောင့်သင်မလိုအပ်သောငွေအမြောက်အများကိုမဖြုန်းတီးပါနှင့်။
NAS ဆာဗာတစ်ခုသို့မဟုတ်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ထားသောသိုလှောင်ရေးယူနစ်သည်အခြားအရာများအပြင်ကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောမည်သည့်ထုတ်ကုန်မှမဆိုဖိုင်များကိုရယူနိုင်သည်၊ မိုးတိမ်တွင်အရန်ကူးခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်မာလ်တီမီဒီယာစင်တာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကမ်းလှမ်းချက်များ အများကြီးဖြစ်နိုင်ခြေ အသေးစိတ်လေ့လာရန်အရေးကြီးသည်။
ပြီးတော့ NAS ဆိုတာဘာလဲသိလား။ မှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပါ။ သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းမြောက်စွာဖတ်ရှုပါလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လဲ tutorial » NAS ဆာဗာဆိုတာဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ၊ ဘာအတွက်လဲ။
Fortnite နှင့်ဆင်တူဆုံးဂိမ်း ၁၀ ခု